Dhacdo Xanuun Badan .. Haweyney Somali Ah Oo Farta Qaniiyo Lagaga Goostay Gudaha Masjid Ku Yaal Norway
Dagaal gacan-kahadal ah oo shalay gelinkii dambe labo dumar ah ku dhex maray gudaha masaajidka soomaalida ee Tawfiiq ayaa sababay in mid ka mid ah haweenkaas qaniinyo farta lagaga gooyay.
Labada haweenka ah ee dirirtay ayaa da`dooda lagu kala sheegay 30-jir iyo 50-jir, waxaana Qaniinyada farta looga jaray haweeneyda 30 Jirka ah, sida ay xaqiijiyeen booliska oo goobta loogu yeeray.
Sarkaalka hoggaaminayay booliska goobta gaaray oo lagu magacaabo Christian Krohn Engeseth ayaa sheegay in haweeneyda Farta laga goostay loo qaaday xarunta caafimaadka ee Legevakt-ha loo yaqaan ee ku taal bartamaha magaalada Oslo.
Wali lama oga xiriirka ka dhexeeyay labadan dumar ee diriray iyo waxa ay isku qabteen, balse booliska ayaa wada baaritaan iyo xog-wareysiyo markhaatiyaal oo dhacdadan ku taxaluuqa.
Arrintan ayaa dhacday shalay oo Axad aheyd, abbaarihii shanta iyo barka galabnimo, waana xilliga lagu wargeliyay booliska .. Xilliga uu dagaalka dhacayay masjidka ayaa ahaa mid ay dad badani joogeen, maadaama ay Axad aheyd.
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa masjidkan Tawfiiq ka taagnaa is-qab-qabsi dhanka maamulka ah oo ay ugu dambeyn xallisay dowladda Norway iyadoona xilka guddoonka u magacowday si kumeel-gaar ah mid ka mid ah labadii garab ee dhanka maamulka isku haystay markii ay ku heshiin waayeen muddo loo qabtay .. Ma cadda wali in dagaalkan uu xiriir la leeyahay is-qab-qabsiga masaajidka.
Masaajidkan oo taariikh ahaan soo jiray ilaa iyo todobaatameeyadii islamarkaana ay aas-aaskiisa iyo maamulkiisuba soomaali lahaayeen, soona dagay xarumo kala duwan oo magaalada Oslo ah ayaa taageero dhaqaale oo gaaraya 7,8 milyan Kr. oo lacagta Norway ah ka heli jiray dowladda sannad walba, waxaana macaamilkii ku xiranba ay dowladdu u qoondeysay lacag gaareysa 1000 kr.
Bishii Juun ee sannadkii tagay ayay dowladda Norway waxa ay jartay lacagtii caawinaadda aheyd ee ay masaajidka siin jirtay kadib markii uu gaaray khilaafka laba kooxood oo midba sheeganaya in uu isagu hoggaanka u hayo masjidka.